OnePlus ghaghi igbanwe usoro ahia nnabata ya Gam akporosis
Cristina Torres ebe a oyiyi | | Mobiles
Mgbe OnePlus bidoro ire ọnụahịa ya, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ obere ụlọ ọrụ, yana ngwaahịa nwere oke na otu ndị okike chọrọ iji gbanwee ihe mbụ adịghị ike ka ọ bụrụ mmalite na uru. Na eziokwu bụ na na atụmatụ nke akwụkwọ ịkpọ òkù dị mkpa iji nweta ịzụrụ otu OnePlus Otu ha nwetara ya. N'otu aka ha nwere ike ijikwa ọchịchọ ngwaahịa ahụ. N'aka nke ọzọ, ha mere ọnụ ya ka ọ bụrụ ụdị ngwaọrụ pụrụ iche. N'okwu abụọ a, ọ bụ ụzọ iji hụ na azụmaahịa gị dị n'ụzọ ziri ezi.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na maka ọtụtụ ndị akwụkwọ ịkpọ òkù na-ewe iwe, na agbanyeghị na ọ bụ ndị mere obere mmetụta nke OnePlus One, ebe ọ bụ na mgbe niile ọ bụ naanị ekwentị nke e rere n'okpuru atụmatụ a, echiche ịkpọ oku malitere ịmalite mgbe ọnụ ahụ malitere ịbụ ihe dị ezigbo mma kwesiri ngosi. Ndị chọrọ ịzụ ya amaghị ka esi enweta ya. A na-ere akwụkwọ ịkpọ oku na ntanetị maka ego dị elu karịa ekwentị nwere. Ma enwere ọtụtụ ndị ọrụ chịkọtara ha igbochi njikwa ngwaahịa mbụ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ogologo oge kemgbe OnePlus chere banyere ịgbanwe ọrịre nke OnePlus One ha, ugbu a, ọ dị ka ha emeela ya kpamkpam.
Akụkọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na OnePlus Otu ọnụ A ga-ere ya site na ọwa gọọmentị ya ma ga-eme ya ọ bụla na Tuesday ọ bụla. Yabụ, onye ọrụ ọ bụla chọrọ inweta otu nwere ike ime nke a site na ịhọrọ ịbanye na web ma debe nke ha. A na-ezere nsogbu ndị na-eme na akwụkwọ ịkpọ oku na ịnweta ekwentị zuru ụwa ọnụ.
Ndi ikot oro ikedịghe ndudue?
Anaghị m eche n'eziokwu OnePlus ghọtara akwụkwọ ịkpọ oku dị ka iwu dara ada ịgbanwe atụmatụ ahụ wee họrọ nke ọdịnala. N'ikwu eziokwu, ụlọ ọrụ ga-emegharịrị onwe ha, n'ihe banyere nke a, nke na mbụ bụ ihe ịga nke ọma yana karịa ụzọ niile dị ukwuu iji wee nweta ahịa na usoro okike ndị ejibeghị oke ruo taa; ugbu a ọ bụ ihe erere ere. Ike gwụrụ apụtaghị ọdịda. N'ezie, o siri ike iche n'echiche otu Onye gbakwunyere gaara abata taa ma ọ bụrụ na atụmatụ ịkpọ oku anaghị abịara ha.
Na atụmatụ ọhụrụ, ha na-atọ ntọala nke ihe ga-abụ ahịa ọzọ. Yabụ, na mkpokọta, OnePlus na-ezube ire ọnụ ahịa ọhụrụ ahụ site na weebụsaịtị ya. Ya mere, a ga-ererịrị ọgbọ nke abụọ nke ọnụ ahịa a site na atụmatụ ọhụrụ a. Ekwesiri iburu n'uche na dika imaatu na China, emeghela ulo ahia mbu, ya mere o gha abu ihe ijuanya na n'oge na adighi anya, ahia nke OnePlus One na umuaka nke ulo oru nke ulo oru a gha abanye na uzo ndi ozo. ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụ maka teknụzụ.
Gịnị banyere akwụkwọ ịkpọ òkù bụ ọganihu. Ọ dị mma mgbe ọ dịruru, ọ na-egosipụtakwa usoro ọhụụ nke obere ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike iji mezuo atụmatụ ha iji nweta ihe OnePlus bụ taa. Ọ gaghị adị mfe, mana ọ ga-ekwe omume dịka ha gosiri. Cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus gbanwere usoro ahia nnabata ya